Arab Hotel Investment Conference bụ azụ: Gịnị kpatara na ọ dị ịtụnanya
Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Arab Hotel Investment Conference bụ azụ: Gịnị kpatara na ọ dị ịtụnanya
N'afọ gara aga, nkwaghari nke 14 Nzukọ Arab Hotel Investment Conference (AHIC) si Dubai Jumeirah Madinat na Emirate Ras Al Khaimah (RAK) gbara agbata obi bụ nnukwu nsogbu.
Ras Al Khaimah ebee? Ọ dị otu awa si na ọdụ ụgbọ elu Dubai.
Mgbe ị bịarutere n'etiti abalị na ọdụ ụgbọ elu Dubai, ma na-anya ụgbọ ala n'okporo ụzọ awara awara na-agabiga n'ọzara, ọ bụ n'ezie ọhụụ ọhụụ ọhụụ: enweghị skyscrapers, enweghị mgbochi okporo ụzọ, ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ bụ nnukwu ugwu na-adịghị efu nke na-ekpuchikarị n'ehihie, na naanị ụfọdụ kamel na-aga ije n'abalị.
Mgbe ụgbọala ahụ na-ewe otu awa, na mberede, a kpọtere ụra dị ka ọkụ nke nnukwu ụlọ dị ka Fata Mogana (mirage) si na mbara igwe pụta. Bịaru nso, ọ bụghị Fata Mogana kama dlọ oriri na ọdụ Walụ Waldorf Astoria ọhụrụ emeghere.
Dika ulo oru di na Waldorf Astoria hotel ezughi oke iji kwado ihe omume AHIC na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị nnọchiteanya 2,000, e wuru nnukwu ụlọ ntu oyi zuru oke maka ihe omume a na naanị maka ụbọchị 3 nke ogbako ahụ.
Anyị na-ekwu maka ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde dolla 2 nke etinyere n'ime ájá maka ụlọikwuu humongous zuru ezu nke nwere teknụzụ kachasị ọhụrụ - Wi Fi, ụlọ ọrụ na-agbasa ozi na TV, na ebe a na-agagharị. Dị nnọọ ịtụnanya!
Onye na-ekwu okwu na BBC Hard Talk bụ Stephan Sackur, onye si Moscow na-ajụ oyi, na-agba odeakwụkwọ Russia nke Russia, Sergej Lavrov ajụjụ ọnụ, wee hụ n'ụsọ osimiri na-agagharị n'okporo ụzọ n'echi ya na ndị na-ege ntị mara mma na ọnọdụ dịpụrụ adịpụ nke 45 Celsius (113 degrees Fahrenheit).
A na-akpọgharị ndị na-achị achị na ndị isi nke Ras Al Khaimah na mpaghara ahụ dum kapeeti uhie na ndị mmadụ na-agba ọsọ gaa obodo AHIC dị n'akụkụ osimiri.
Ras Al Khaimah bụ nke kachasị dị obere na UAE nke kachasị obere ma na-eme nwayọ na-akwalite njem nleta ya, mpaghara ndị nweere onwe ha, na ala.
Agbanyeghị ịbụ nke abụọ pere mpe na UAE na ọnụọgụ ndị bi na 400,000, ezigbo ala na ụlọ ndị ọbịa, yana ndị nnukwu ụlọ ọrụ dịka RAK Ceramics na Gulf Pharmaceutical Industries (Julphar) enyerela RAK aka ịche nsogbu nsogbu akụ na ụba metụtara mmanụ. ndị agbata obi ya.
N'oge mmeghe AHIC 2019, onye ọchịchị Ras Al Khaimah malitere asọmpi iji mepụta ebe “pụrụiche”.
Onye ọchịchị ahụ, Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi nke Ras Al Khaimah, malitere asọmpi Grand RAK Project nke na-emeghe ndị nnọchi anya debara aha na mmemme ahụ.
Sheikh Saud kwuru, sị: “Anyị na-akwado ọrụ na echiche ndị na-akpali ihe okike ma tinye Ras Al Khaimah na-ebute ụzọ nke ngalaba ndị njem na-achọ ịmepụta ebe ezumike ọhụrụ nke pụrụ iche.
“Ntolite etolite bụrịrị ihe ngosipụta nke njem njem njem nke Ras Al Khaimah, anyị na-achọ iji hụ na nke a na-aga n’ihu site na iji atụmatụ njem nlegharị anya anyị wee ruo ebumnuche akọwapụtara nke ọma.”
Na-arụ ọrụ na otu ndị jikọtara ndị na-emepụta ụlọ nkwari akụ na ndị ọrụ, ndị na-abanye ga-enwe ọnwa 3 iji kwadebe echiche mbido nke akwadoro nyocha dị elu.
A ga-ekenye ọrụ mmeri ahụ ebe osimiri ga-achọsi ike.
Ngalaba ikpe ikpe maka Grand RAK Project gụnyere Abdullah Al Abdooli, Onye isi nchịkwa na Onye isi, Marjan; David Daniels, Onye isi ihe owuwu, SSH; Filippo Sona, Onye isi nchịkwa, Hospitallọ Ọrụ Ọbịa, Drees & Sommer; na Kevin Underwood, Isi, HKS Hospitality Group.
Ọ bụ ezie na UAE ka bụ ahịa kachasị ike nke RAK, nke na-anọchite anya ihe ruru pasent 40 nke ndị ọbịa niile, Europe na-enweta ala. Ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta German na RAK toro site na 53 pasent n'afọ gara aga, na-esote 28.5 pasent uto site na UK, 25 pasent si India, na 4 pasent si Russia.
Gọọmentị nke Ras Al Khaimah nwere akụkọ ihe mere eme na mpaghara ndị njem malitere na mmeghe nke ụlọ nkwari akụ mbụ nke akara mba ụwa na 2001 ma na-aga n'ihu n'ọtụtụ buru ibu.
Site na mwepụta nke mbụ Arabian Hotel Investment Conference na afọ gara aga, ọkụ ọkụ na-enwu na Ras Al Khaimah. Usoro ihe omume a, nke gosipụtara ihe karịrị 100 ndị ọkà okwu si gburugburu ụwa, emeela ka a gwọọ ya gburugburu isiokwu afọ a na-elekwasị anya n'ichezi esemokwu dị ugbu a na mmekọrịta nke onye nwe ya, na-ekpughe ụzọ ọhụụ maka azụmahịa, na-enyocha usoro ndị ahịa chọrọ n'ọdịnihu, na-eme ka mmekọrịta mmekọrịta dị n'etiti ndị niile metụtara ya iji kwado mmepe na ọganihu
N'okwu ya, Jonathan Worsley, Onye isi oche nke AHIC, kwuru, sị:
“O doro m anya na anyị na-aga mgbanwe mgbanwe n'ime ahịa itinye ego na Middle East si ahịa ego. Dika nnweta ozo na abia na ntanetị ma ahịa na-asọ asọmpi, ike nke mmekọrịta onye nwe ya na ụlọ ọrụ agbanweela. Dika odida obodo na-adi asọmmpi ọ bụ ihe dị mkpa na otu niile na-arụkọ ọrụ ọnụ maka otu ebumnuche. N'iburu nke a n'uche, yana ndị ndụmọdụ anyị na ndị mmekọ na Insignia, anyị kwubiri na evolushọn na 2019 abụghị maka ịmepụta ihe na-emebi nsogbu kama ọ bụ ịchọta ụzọ dị mma iji mepụta ọnọdụ doro anya na imekọ ihe ọnụ. Yabụ, anyị bịara isiokwu anyị nke 2019, Ejikọtara maka Successga nke Ọma.
“Mmekọrịta abụghị naanị na mmekọrịta kama ọ bụ n’usoro nke usoro azụmahịa na ihe na-eme na gburugburu akụ na ụba obodo ka ụfọdụ ọrụ ndị kacha wee nwee oke n'ọgbọ anyị ka a na-ekwuwapụta yana mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mgbanwe teknụzụ, yana ịgbanwe mgbanwe ndị ahịa na-agbanwe nkwari akụ itinye ego na nkwari akụ. "
Kedụ ka azụmahịa ga - esi gakọrịta?
Onye ndu ụlọ ọrụ ọhụụ, Stardom Ọkà okwu Sebastien Bazin, Onye isi oche & onye isi oche nke ACCOR, ga-agwa obodo AHIC okwu "Gịnị bụ kompas gị n'oge oge ọgba aghara, ihe ọhụrụ, na ọgba aghara ụwa?"
Onye isi oche ọgbakọ ọgbakọ bụ Stephen Sackur ga-akwụsị ọrụ ụbọchị ya dị ka onye ọbịa nke HARDtalk wee laghachi n'ụsọ osimiri dịka e kenyere ya otu ọrụ na AHIC 2019 - ịjụ ajụjụ ndị ụlọ ọrụ chọrọ ka a gwa ha ka ndị bịara wee soro ha pụọ nghọta ha chọrọ.
Mekọrịta maka ihe ịga nke ọma? Ndị nwe atọ na ndị ọrụ atọ ga-anọdụ ala na Stephen Sackur iji kpaa maka otu ha si "Mmekọrịta maka Successga nke Ọma." Ọ dịbeghị mgbe ọ bụla n’akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ nkwari akụ ahụ, e nweela ọtụtụ ụlọ nkwari akụ dị otú ahụ. Kedu otu ụlọ ọrụ si anagide yana ụdị azụmaahịa na-agbanwe nke ga-enyere aka idowe ma dọtakwuo ndị nwe na ndị na-etinye ego ha? Stephen Sackur ga-ewetara ndị ọrụ ahụ ajụjụ ndị a siri ike.
Wususuw ho dɛn? N'ime ndị na-ekwu okwu a bụ:
Abdullah Al Abdouli, onye isi na onye isi oche nke Marjan, onye na-ahụ maka imepụta na imepụta atụmatụ nnabata isi Ras Al Khaimah gụnyere agwaetiti Al Marjan dị egwu, mmepe njem nlegharị anya nke ụwa na-enye ndị ohere ọmarịcha ohere.
Jay Rosen, Isi nke Investment & Finance, Companylọ Ọrụ Mmepe nke Oké Osimiri Uhie, nke na-emepụta ọmarịcha njem nleta mara mma n'ime mpaghara 28,000 kilomita mara mma nke gụnyere agwaetiti nke ihe karịrị agwaetiti 50 ndị a na-emebibeghị, ugwu mgbawa, ọzara, ugwu, ọdịdị, na Omenala.
Nicholas Naples, onye isi oche ndị isi, ego itinye ego na ọha na eze, Amaala, mmepe mmepe oke ọnụ bụ akụkụ nke usoro agbakwunyere iji zụlite Oke Osimiri Uhie nke Saudi Arabia na-elekwasị anya na ahụike, ndụ ahụike, na ntụgharị uche. Mmepe ahụ ga-ekpuchi mpaghara karịa 3,800 sq. Km. ọ ga-elekwasịkwa anya karịa igodo ụlọ nkwari akụ 2,500.
Samuel Dean Sidiqi, onye isi oche nke RAK Properties, adọtala mmasị mpaghara na nke ụwa maka ịmalite ụlọ nkwari akụ ndị mara mma, ebe ntụrụndụ, na ụlọ ahịa. Site na ihe karịrị $ 540 nde nke isi obodo dị, ụlọ ọrụ ahụ dị n'azụ Anantara Mina Al Arab, Ras Al Khaimah, na 350-key InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort.
AHIC 2019 na-eme site na Eprel 9-11 na AHIC Village, Ras Al Khaimah.
Celsius Dubai Europe Government Ile ọbịa Hotel InterContinental Investment Ras Al Khaimah Oké Osimiri Uhie Stephen Sakur
Debe ụgbọ elu Alitalia ụgbọ elu: 900 nde euro Bridge mgbanwe ntụgharị
WTM Africa bidoro na ọkwa dị elu